१५ पुस - पारिजातसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो। त्यहाँ १८–१९ वर्षकी एकजना पत्रकार बहिनी आएकी थिइन। उनले सोधिन, ‘पारिजात भनेको को हो?’ त्यो प्रश्न सुनिसकेपछि मेरो दिमागमा भुइँचालो गयो।
७ पुस - पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको थेगो थियो– हावापानी सुहाउँदो व्यवस्था बनाउँछु भन्ने। नेपालका कम्युनिष्टहरू राजा महेन्द्रकै कोखबाट उत्पन्न भएका हावापानी सुहाउँदा कम्युनिस्ट हुन्। हामी अलि बेग्लै खालका कांग्रेस हौं, यिनीहरु पनि बेग्लै खालका कम्युनिस्ट हुन्।
२७ मंसिर - यिनै पुराना अनुहारबाट नेपाली जनताले नयाँ अनुहारको परिकल्पना गर्नुपरेको छ। एकपटक त्यो अकर्मण्य, अनुदार र स्वार्थी आवरण उतारेर यही पृष्ठभूमिबाट कालिदासमा रूपान्तरण भएको नेता पाउन सकौंला? नजिकैका छिमेकी नेताबाट ईख लिएर पनि निद्राबाट जागेको अगुवा भेटाउँला हामी?
२६ मंसिर - मतपरिणामले हामीलाई नवीन बाटोमा हिंड्न उत्प्रेरित गरेको छ। ‘काँग्रेस उकालोमा पनि मुस्कुराउँछ, ओरालोमा पनि मुस्कुराउँछ’ भन्ने विपिको विचारले हामीलाई हारबाट पनि उर्जा र उत्साह प्राप्त भएको छ। अब हामी नवीन यात्राको शुभारम्भ गर्न गैरहेका छौं।
२४ मंसिर - यो चुनावले प्रतिपक्ष कमजोर बनाएको छ, यो प्रमुख नकारात्मक पक्ष हो। प्रतिपक्षमा भएको शक्तिले हस्तक्षेपकारी रुपमा काम गर्न सकेन भने वाम सरकार निरकुंश बन्न सक्छ। यो निश्चित जस्तै छ।
२३ मंसिर - देउवा जब जब ‘फस्र्ट–म्यान’ भए, तब तब दुर्घटना मात्रै भएका छन् धेरै जसो। यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेसको दुर्घटना पनि यीनकै कारण भएको हो। जसले ज्योतीषका भरमा मात्र सात पटक देशको प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्छ, ऊ ‘सिम्पल’ रुपमा राजनीतक ‘लद्धु’ पात्र मात्र हो।
२१ मंसिर - नेपाल आर्थिक रुपले पिछडिएको होला तर लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा विश्वमा अग्रणी छ भन्ने निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ।
२१ मंसिर - यसअघिको संक्रमणकाल ‘कारण’ अर्थात् मुद्दाहरुमाथि आधारित थियो। अबको संक्रमणकाल समाधानमा आधारित हुन्छ। हिजो समस्या देखाउने कुरा मात्र थियो, अहिले समस्या समाधान गर्ने कुरा आयो। जस्तै हिजो दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, भाषा, क्षेत्रीयता, गरिबी जस्ता मुद्दाका कुरा थिए, अब यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने अभिभारा...
२५ कार्तिक - हामी देशको यस्तो राजनीतिक अवस्थामा छौं, जहाँबाट देश कतातिर जाने भन्ने बाटो फाट्छ। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने बाटोतिर जाने कि, राष्ट्रियतालाई कमजोर बन्ने बाटोतिर जाने?
१५ कार्तिक - चीनमा सीको पुनरावृत्तिको अर्थ हो– अर्को ५ वर्ष चीनको विकासले तीव्र गति लिनेछ र त्यसमा विशेषगरी छिमेकी देशहरूलाई समाहित गरिनेछ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सीले प्रस्ट रूपमा भनेका छन्– विकासका मुद्धामा चीनले छिमेकीसँग सहकार्य गर्नेछ।